မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 20, 2012 - 4:30 am စကားမစပ်၊ ရွှေဂုံတိုင်မှာ ဆွဲထားတဲ့ အိုဘားမားပုံ graffitti ပုံ တွေ့ပြီးကြပြီလား။
Reply ohnmar November 20, 2012 - 9:11 am တစ်ကယ့်ကိုသမိုင်းဝင်တဲ့မိန့်ခွန်းပါဘဲ။ အမေရိကန်စံကိုသေသေချာချာရှင်းလင်းအောင်
Reply haymar November 20, 2012 - 9:39 am Mr. President never used the word “Rohijar”. The article is wrong.
Reply FOX November 20, 2012 - 9:54 am သိပ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့မိန့်ခွန်းမျိုးပါ…ဒီလိုမျိုးသာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင် မကြာတော့တဲ့ကာလမှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာပြန်လက်မထောင်နိုင်လာမှာပါ…
Reply pps12345 November 20, 2012 - 10:08 am စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနှင့်သူတို့သားသမီးတွေ ကတော့ပြည်သူတွေ အတွက် အမှိုက်တွေပါ။ ဒါပေမယ့် တပ်မတော်သား ရာထူးငယ်များကတော့ ပြည်သူပါပဲ။
Reply Aumg Kyaw Nyunt November 20, 2012 - 2:17 pm OBAMA had proven that he will be with Myanmar people who are struggling for genuine Democracy and developed Myanmar. Only thing we need is to be determined to move courageously for Democratic Myanmar.
Reply U Mg Gyi November 20, 2012 - 5:03 pm A 30 minutes short lecture about Democracy & Human Rights.
Reply မင်းခေါင် November 21, 2012 - 9:27 am ကမ္ဘာ့အထင်ကရခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဒီလိုသေချာပြင်ဆင်ထားတဲ့မိန့်ခွန်းကို